Raspbian inogadziridzwa neiyo nyowani kernel uye faira maneja manejimendi | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yepamutemo Raspberry Pi inoshanda sisitimu yemabhodhi ayo akareruka ine vhezheni nyowani senge yeChitatu chino. Ndezve Raspbian 2020-02-05, inogadziridza iyo inounza inonakidza maficha maficha senge kusimudzira mune iyo faira maneja, senge iyo Nzvimbo dziripo zvakare. Musiyano ndewekuti panzvimbo pekuve mune yakatarisa maonero, ikozvino rave ipaneru diki kumusoro kweye dhairekitori browser. Ivo zvakare vakaisikidza nyowani "nyowani dura" icon mubarabha uye mamwe ma icon akagadziridzwa.
Pakati pekushandurwa kunounzwa mune ingangoita chero vhezheni yechero inoshanda system, tinovimba vanozounza kernel nyowani. Uye ndezvekuti, kunyangwe kana isina kuiswa kune yakakwira vhezheni, senge mune ino kesi, yakagadziridzwa kernel inosanganisira yazvino yekuchengetedza zvigamba zvakawanikwa nekugadziriswa mumavhiki apfuura, inova inogara iri nhau yakanaka. Iyo kernel inoshandiswa neiyi nyowani vhezheni yeRaspbian iri Linux 4.19.93.
Raspbian Pfungwa 2020-02-05
File maneja kuvandudza.
Mutsva Python mitambo.
Kudzora kwevhoriyamu kuvandudza.
Nyowani Nyowani mabhuroko.
Screen flicker inogona kusetwa zviri nyore.
Yakagadziridzwa mapakeji, pakati payo atinawo Chrome 78 uye Tafura 19.3.2.
Kushanda kweARM NEON maitiro neVhura SSL.
Yakagadziridzwa yakawanda-yekutarisa rutsigiro.
Vashandisi varipo, tinogona kugadzirisa nekuvhura terminal uye typing iyi mirairo:
Kune avo vanoda gadza iyo inoshanda sisitimu kekutanga, iyo vhezheni itsva yakatoverengerwa mu NOOBS, chishandiso chepamutemo chekuisa Raspbian pane chero Raspberry Pi kubva kukambani. Sezvatinoverenga mugwaro repamutemo, rinowanikwa pa Iyi linkKuisa Raspbian pane Raspberry Pi kuri kurodha pasi NOOBS, kuburitsa iyo ZIP, kuteedzera zvirimo kumidzi yekadhi reSMSD ratakatomisikidza kare, tichiisa kadhi pabhodhi uye nekutevera mirairo inoonekwa pachiratidziri.
Kana iwe ukaedza iyo nyowani vhezheni, inzwa wakasununguka kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspbian inogadziridzwa nekernel nyowani uye kugadzirisa mune iyo maneja faira, pakati pevamwe